Soomali ku xiran Ukraine - BBC News Somali
3 Febraayo 2012
Image caption Soomali si sharci darro ah halkaasi ku tegtay ayaa lagu haayaa xabsi
Qaxooti Soomali ah oo si sharci darro ah ku galay dalka Ukraine ayaa lagu hayaa xabsiayada dalkaasi, Hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa sheegtay in dadkaasi ay cunnada ka soomeen.
Mas’uliyiinta laanta socdaalka ee Ukraine, waxay ku doodayaan in dadkani aysan cunnda ka soomin ee guryahooda ay wax ku cunaan.
Hay'adda Amnesty International ayaa ugu baaqday dowladda in ay dadkaasi ay ula dhaqato sida da magan galyo doon ah, lakin waaxda socdaalka ee dalkaasi waxay leedahay dadkaasi waxaa loola dhaqamayaa si waafaqsan xeerarka Midowga Yurub ee la xiriira socdaalka.
Amnesty waxaa kale oo ay ugu digtay dowladda in ay dadkaasi ku celiso Soomaaliya, oo ay sheegtay in ay ka socdaan dagaalo. Dowladda Ukraine waxay ku adkaysanaysaa in ugu horeyntii ay baareyso in dadkani ay Soomali yihiin iyo in kale.
Ukraine waa goob marriin u ah dadka doonaaya in ay Europe soo galaan, waxayna badigooda ka soo galaan xadka uu dalkaasi la wadaago Ruushka.